काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको बेला समेत न्यूनतम बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले बैंकहरुले देशभर आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी आवश्यक कर्मचारी मात्र उपस्थित गराई सेवा दिइरहेका छन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंकले समेत यो क्रमलाई...
काठमाण्डौ। विश्व महामारी कोरोनाभाइरसबाट चीनमा ज्यान जाने क्रममा ब्रेक लागेको छ। पछिल्लो २४ घन्टाको अवधिमा एकजनाको पनि कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट ज्यान नगएको पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा यो पहिलोपटक हो। गत डिसेम्बरको अन्तिम साताबाट चीनको वुहान सहरबाट देखिएको यो भाइरसबाट हरेक दिन संक्रमितहरुले ज्यान गुमाउँदै आएका थिए। पछिल्लो २४...
अमेरिकाद्वारा कोभिड–१९ सँगै लड्ने औषधि नपठाए भारतमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी
काठमाण्डौ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व महामारी कोरोनाभाइरसविरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्ने हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन औषधि भारतले नपठाएर ठीक नहुने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले सोमबार कोरोनासम्बन्धी आफ्नो ब्रिफिङमा यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। ‘ठीक छ भारतले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन औषधि नपठाओस् तर यसको...
अमेरिकामा एकैदिन १२५५ को मृत्यु, इटलीमा आशाको किरण देखिँदा फ्रान्स र यूकेमा भयावह
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको चपेटामा परेको अमेरिकामा एकैदिन १२५५ संक्रमितको मृत्यु भएको छ । योसँगै अमेरिकामा हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १० हजार ८७१ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा अमेरिकामा ३० हजार ३३१ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै अब अमेरिकामा कुल संक्रमितको संख्या ३ लाख ६७ हजार भन्दा...
सर्वोच्च अदालतले श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने र आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गरी राहत पारदर्शिता कायम गरी वितरण गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आज लकडाउनका कारण आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गरी राहत दुरुपयोग नगरी पारदर्शी तरिकाले वितरण गर्न आदेश दिएको...
कोरोनाविरुद्ध युद्ध लडिरहेका ‘लडाकू’सँगै उपमहानगरले चन्दा मागेपछि धरानमा हङ्गामा
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईको मोर्चामा योद्धाको रुपमा चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरु अनवरत खटिरहेका छन् । व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण(पीपीई) समेत पर्याप्त नहुँदा समेत जेनतेन रेनकोट लगाएरै पनि संभावित संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरु काममा लागेकै छन् । देशमा संक्रमण...
नारायण ढुङ्गाना कोभिड–१९ को यथार्थ जानकारीबारे तपाईं अलमलमा परिरहनुभएको छ रु सामाजिक सञ्जालमा आउने फरक–फरक सूचनाले हैरानी खेपिरहनुभएको पो छ कि रु अब ढुक्क हुनुहोस् । तपाई त्यो हैरानीबाट मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ । आजदेखि कोभिड–१९ का आधिकारिक सूचना एकै ठाउँबाट जानकारी लिन सक्नुहुनेछ । सँगै मोबाइल एप्समार्फत क्वारेन्टाइन अनुगमन...
कोेरोना भाइरस ( कोभिड– १९) को सम्भावित जोखिम हुन नदिन गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका– ७ ले गाउँमा आएका पाहुनालाई समेत स सम्मान आफ्नै घर फर्काउन थालेको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गठित स्थानीय प्रतिकार्य समितिले गाउँमा आएका पाहुनालाई आएकै दिन घर फर्काउने गरेको हो । सो समितिले आज बिहान लमजुङको विचौरबाट पैदल हिँड्दै ...
काठमाण्डौ । संघीय सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बनाएको कोषमा सेयर बजारको फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । केही दिनअघि बसेको नेप्सेको संचालक समितिको बैठकले कोरोना सहयोग कोषमा सो रकम बराबरको सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार रु. ३ करोड ५१...
बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन जारी राख्ने सरकारको निर्णय
काठमाण्डौ । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरेको लकडाउनलाई ७ दिन लम्ब्याएर बैशाख ३ गतेसम्म पुर्याउने भएको छ । केहीबेरअघि सम्पन्न मन्त्रीपरिषद बैठकले २ सातादेखि जारी लकडाउनलाई पुनः एकसाता बढाएर बैशाख ३ गतेसम्म कायम गराउने निर्णय गरेको हो । एक मन्त्रीका अनुसार सीमा बन्द समेत सोही अवधिसम्म कायम...
यी हुन् 'मार्गबर्ग'देखि 'कोरोना'सम्म १२ खतरनाक भाइरस, जसले विश्वमा हलचल नै मच्चाए
काठमाण्डौ । जबदेखि संसार बस्यो तबदेखि भाइरसको अस्तित्व पनि रहँदै आएको छ। केही यस्ता भाइरस पनि छन् जुन मानिसको उत्पत्ति हुनुअघिदेखि नै छन्। साइन्टिफिक अमेरिकन म्यागजिनका अनुसार पृथ्वीमा वौनिकले करिब ६लाख यस्ता भाइरस पत्ता लगाएका छन् जुन जनावरबाट मानिसमो प्रवेश गर्न सक्छन्। मानिस लगातार यी भाइरसको आक्रमणसँग लडिरहेका छ�...
कोभिड–१९ ले चीनको व्यापारमा फलिफाप, अन्य देशमा मेडिकल सामग्री पठाउन भ्याइनभ्याइ
काठमाण्डौ। कोरोनाभाइरसले यतिखेर पूरै विश्वमा सन्त्रास छाएको छ। विभिन्न देशमा कोरोना रोकथामका लागि औषधि वा भ्याक्सिन विकासमा वैज्ञानिकहरु लागिपरेका छन्। अहिले कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि विश्वका अधिकांश देश लकडाउन गरिएका छन्। लकडाउन नै कोरोना संक्रमण फैलिन नदिने अचुक उपायका रुपमा लिइएको छ। अर्को उपाय भनेको यो भाइरसबाट बच्न मास्क...
लकडाउन कति लम्बिएला ? प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमार्फत घोषणा गर्नसक्छन् !
काठमाण्डौ । सरकारले जारी लकडाउनलाई पुनः कम्तीमा एकसातासम्म लम्ब्याउने भएको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको बैठकमा लकडाउनलाई कम्तीमा पुनः एक साता लम्ब्याउनुपर्ने सहमति बनेको र सोही विषयलाई सोमबार बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्णय गर्ने स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले...
जापानले कोरोना रोकथाममा उपयोगी औषधिको उत्पादन बढाउने, इच्छुक देशहरुलाई निःशुल्क दिने
काठमाण्डौ । जापानले कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि उपयोगी मानिएको एउटा औषधिको उत्पादन बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै जापानले यो औषधि आपूर्ति गर्न इच्छुक देशहरुलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ। चीनमा गरिएको प्रयोगका क्रममा कोभिड-१९ विरुद्धको उपचारमा सहयोग पुगेको पाइएपछि जापानले त्यो औषधीको उत्पादन बढाउन लागेको हो। जापानी कम्पनी...
बाघमा पनि कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि
काठमाण्डौ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित ब्रोङ्स जूमा एउटा बघिनीलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। चार वर्ष उमेर पुगेकी उक्त मलेअन बघिनीबाट सङ्कलित नमुनामा भाइरस भेटिएको आयोवास्थित राष्ट्रिय भेटरिनरी प्रयोगशालाले जनाएको छ। प्रयोगशालाका अनुसार उक्त बघिनीसहित उसकी बहिनी, अन्य दुई आमुर बाघ र तीन अफ्रिकी सिंह...